Apple na Samsung na-eme uwe kacha mma dị ka akụkọ a | Gam akporosis
Apple na Samsung nwere ọnụego afọ ojuju ndị ahịa kachasị dị elu maka wearables
Wearables, n'etiti nke anyị na-ahụ smart ese na ọrụ wristbands, bụ otu n'ime ahịa ndị na-erigbu ndị kasị, ọ bụ ezie na ịgwa eziokwu na nke ọla aka na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụ precursor maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji nzọ na smartwatches. Gam akporo Wear 2.0 ga - enyere aka ịtinye uche maka ụdị ngwaọrụ ndị a.
Ma mgbe anyị maara na Apple ka akara ugbu a onye nwere ederede afọ ojuju kacha mma nwere n'etiti ndị ahịa maka smartwatches, ebe Samsung nwere otu ọnọdụ ahụ n'etiti ndị na-arụ wristbands, dị ka akụkọ JD Power 2016 Fitness Band Device si kwuo.
Akuko jikoro na n'ozuzu afọ ojuju index nwere smartwatches n'etiti ndị ahịa zụrụ ụdịrị ụdị a n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga yana otu ihe ahụ ndị zụtara mgbaaka ọrụ na ọnwa 12 gara aga. Akụkọ ọ bụla na-enyocha afọ ojuju n'etiti ihe 12. Emechara nyocha a site na ndị ahịa 11 wepụtara onwe ha.
Nnyocha JD Power na-atụle ndenye afọ ojuju ndị ahịa maka smartwatches na usoro nke dị mkpa Ọ na-aga na nke a: ịdị mfe nke ojiji, nkasi obi, ndụ batrị, atụmatụ ekwentị, ọnụahịa, ike / ịdịte aka, nha panel, ụdị / ọdịdị, ngwa ndị dịnụ na ọrụ ndị ahịa N'ime eriri igwe ejiri rụọ ọrụ, ihe ndị a bụ: nchekwa, ike, ịdị mfe nke iji, ndụ batrị, ọnụahịa, ụdị dị iche iche, nkasi obi, ịke, ogo panel, ngwa dịnụ yana ọrụ ndị ahịa.
Apple Watch jisiri ike bulie elu na a akara nke 852 isi site na ngụkọta nke 1.000, ebe Samsung kwụsịrị Apple na akara 842 maka akara wristbands. Sony, Fitbit na LG bịara na nke atọ, nke anọ na nke ise na 840, 839 na 827 isi.
Ọ ga-adọrọ mmasị ịmata ebe ọ ga-abụ ndị Mi Band 2 si Xiaomi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Apple na Samsung nwere ọnụego afọ ojuju ndị ahịa kachasị dị elu maka wearables